Madaxweyne Farmaajo oo khudbad u jeediyay Golaha Shacabka (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo oo khudbad u jeediyay Golaha Shacabka (SAWIRRO)
Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadal ka jeediyay fadhi gaar ah oo Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya ay yeesheen ayaa uga warbixiyay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka, waxa uuna ka codsaday in loo noqdo heshiiskii Seteembar 17 ee hagaya hannaanka doorashada dalka.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay dadaalkii muuqday ee dowladdu ay ku bixisay qabsoomidda doorasho ka tarjumeysa horu-socodka dalka, iyada oo mudnaanta la siinayo in midnimo iyo wadajirka lagu xaqiijiyo geedi socodka siyaasadeed iyo dimuqraadiyadeed ee dalka.
“Dowladda waxaa ka go’neyd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskii 17-kii September iyo talooyinkii Guddiga Farsamada ee 16-kii February 2021. Haseyeeshee, waxaan ka gudbi weynay caqabado gacan-ku-rimis ah oo laga lahaa ujeeddooyin gaar ah iyo dano guracan.”
Madaxweynaha ayaa adkeeyay in Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta, hirgelinta doorashada iyo amnigeeda, si ay doorashadu ugu qabsoomto jewi nabad oo xasilloon.
“Waxaan Ra’iisal Wasaaraha u xilsaaray qabanqaabada iyo martiqaadka saxiixeyaasha heshiiskii 17-kii September 2020, si loo meelmariyo heshiikaas iyo talooyinkii farsamo ee ka soo baxay shirkii Baydhabo ee 16-kii February 2021. Sidaa daraadeed, waxaan farayaa Xukuumadda in ay u diyaargarowdo hawshaas baaxadda weyn ee hortaala.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed in ay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, lana garab istaago Ciidamada Qalabka Sida, isaga oo ugu baaqay siyaasiyiinta in ay ka shaqeeyaan danta guud, kana waan-toobaan kicinta dadweynaha iyo ficil kasta oo amniga ka dhan ah.
Previous articleDanjire Tarsan “Madaxweyne dhaxalkaga dagaal haku dambeysiin”
Next articleMareykanka iyo Midowga Yurub oo soo dhaweeyay go’aanka Golaha Shacabka